ट्वीटरले अकाउन्ट प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु – Milappost
ट्वीटरले फेरी एकपटक अकाउन्ट प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कम्पनीले प्रयोगकर्ताको ट्वीटर अकाउन्ट प्रमाणीकरण प्रक्रिया आधिकारिक रुपमा पुनःसुरु गरेलगत्तै सबै अनुप्रयोगहरुको समीक्षा गर्न थालेको ग्याजेट नाउले बताएको छ। ट्वीटर अकाउन्ट प्रमाणीकरण प्रक्रिया पुरा भएपछि प्रयोगकर्ताको ह्यान्डल छेउ निलो चिन्ह, अर्थात् ‘ब्लु टिक’ आउछ।
यो ‘ब्लु टिक’ले कुनै ट्वीटर अकाउन्टमा सार्वजनिक चासो उच्च रहेको प्रमाण जनाउछ। तै जोकोहीले आफ्नो ट्वीटर अकाउन्टमा ‘ब्लु टिक’ पाउन सक्दैनन्। यसको लागि ट्वीटरले बनाएको प्रमाणीकरण प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ। ‘ब्लु टिक’ पाउन ट्वीटर अकाउन्ट प्रामाणिक, उल्लेखनीय र सक्रिय हुन जरुरी छ। ट्वीटरले ६ किसिम अन्तर्गत उल्लेखनीय मानिने अकाउन्ट छुट्टाएको छ, जसमा प्रयोगकर्ताको ट्वीटर अकाउन्ट यी वर्गमध्ये एउटामा पर्नुपर्ने हुन्छ,
२. कम्पनी, ब्रान्ड र गैरनाफा संस्था
३. समाचार संगठन र पत्रकार
५. खेल र एस्पोर्ट
६. कार्यकर्ता, आयोजक र अन्य प्रभावशाली व्यक्ति
ट्वीटर प्रयोगकर्ताका अकाउन्ट यी वर्गमा पर्ने निश्चित भएपछि बल्ल प्रमाणीकरण प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिन्छ। प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु गर्न प्रयोगकर्ताले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटर अकाउन्ट खोलेर अकाउन्टको बायाँपट्टि छेउमा तीनवटा थोप्लो चित्र भएको ‘मोर’ विकल्पमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि ‘सेटिङ एण्ड प्राइभेसी’ विकल्प क्लिक गरेर ‘योर अकाउन्ट’मा जानु पर्छ।
‘योर अकाउन्ट’ भित्र ‘अकाउन्ट इन्फरमेसन’ विकल्प हुन्छ, जसमा प्रयोगकर्ताको सबै आधिकारिक विवरण जानकारी हुन्छ। त्यसमध्ये ‘भेरिफिकेसन रिक्वेस्ट’मा क्लिक गरेर ट्वीटरले माग्ने थप जानकारी पुरा गर्न सकिन्छ। आफ्नो अकाउन्टबारे सबै विवरण दिएपछि बल्ल ‘भेरिफिकेसन रिक्वेस्ट’ बुझाउन पाइन्छ।
प्रयोगकर्ताको ‘भेरिफिकेसन रिक्वेस्ट’मा रहेको विवरण समीक्षा गरेपछि ट्वीटरले ‘ब्लु टिक’ दिने वा नदिने निर्णय गर्छ। एकपटक अकाउन्ट प्रमाणित भएपछि आफ्नो ट्वीटर ह्यान्डलमा ‘ब्लु टिक’ देख्न सकिन्छ।
Good News Media on Sale